Iziteshi zesimo sezulu zesifundo sokushintsha kwesimo sezulu eMount Teide | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukutadisha ukuguquka kwesimo sezulu kubalulekile ukwazi imiphumela emibi futhi ukwazi ukulindela, ukudala izinqubomgomo zokuphatha nokuphatha zensimu kanye nemithombo yemvelo.
En ITeide National Park kuneziteshi zesimo sezulu eziphethe ukuqapha imiphumela ehlobene nokuguquka kwesimo sezulu. Kusukela ngoNovemba, inani leziteshi lizokhuphukela ku-XNUMX.
1 Funda ngokushintsha kwesimo sezulu
2 Ukwanda ngezikhathi
Funda ngokushintsha kwesimo sezulu
Kuyadingeka ukunweba inethiwekhi yokuqapha yezimo kanye nemiphumela ehlobene nokuguquka kwesimo sezulu uma sifuna ukukwazi ukwenza amasu okuzivumelanisa nezinhlelo kuzimo ezintsha ezisilindele ngokuzayo.
Kulokhu, ukunwetshwa kwenethiwekhi yokuqapha ngokusebenzisa iziteshi zezulu zeTeide National Park kungokwehlelo lomhlaba wonke olwenziwa Inhlangano Ezimele YamaPaki Kazwelonke (OAPN) Lapho iPicos de Europa, iSierra Nevada, iCabrera, i-Ordesa neMonte Perdido, iCabañeros, i-Islas Atlánticas neTaburiente nazo zibamba khona.
Inhloso yalokhu kulandelwa okwengeziwe ukukwazi ukuhlola umthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu ukukwazi ukulindela nokwakha amamodeli asiza ngokubikezela isimo sezulu. Lezi ziteshi zikala amanani wamazinga okushisa, imvula, umoya kanye nezigameko zemisebe yelanga unyaka wonke njalo ngemizuzu eyishumi. Ngayo yonke le datha, amamodeli akhiqizwa lapho, ngokuya ngokuziphatha kokuguquguquka kwesimo sezulu kuwo wonke amarekhodi atholakele, indlela okuzothathwa ngayo lokhu okuguqukayo ngokwanda komphumela wokushisa nokushintshashintsha kwesimo sezulu kungalinganiselwa.
Iziteshi ezinhlanu zamanje zitholakala ezansi kweLas Cañadas caldera kanti lezi ezintsha zizotholakala ezindaweni eziphakeme ngamamitha angu-2.700 3.200 no-XNUMX ukuthola imininingwane eqondile imiphumela yomkhawulo wobubanzi besilinganiso se-Teide.
Isibalo seziteshi sizokwenyuka sifike kwayisikhombisa ngoba kubalulekile ukuzibeka kule ndawo ngoba kulezi zindawo lapho kubonakala khona imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ngamandla amakhulu.
Izinga lokushisa kulezi zindawo belikhuphuka ngezinga elingaphezu kweshumi nengxenye yesilinganiso seminyaka eyishumi ngaphezulu kweminyaka engamashumi ayisikhombisa, okuyisilinganiso esiphakeme kunesilinganiso seTenerife, esime kokukodwa kweshumi kweziqu eminyakeni eyishumi, nesilinganiso somhlaba jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Iziteshi zesimo sezulu zesifundo sokushintsha kwesimo sezulu eMount Teide
I-Plasticocene, ehlala emhlabeni wepulasitiki